10 Business Twitter Apps maka Enterprise | Martech Zone
Ngwaọrụ ole na ole na-amalite ịpụta maka ụlọ ọrụ iji jikwaa nkwukọrịta Twitter ma ọ bụ maka iji micro-ịde blọgụ n'ime n'ime ụlọ ọrụ ha.
M na-jikwaa pushing Martech Zone ndepụta ka Twitter tinye n'ọrụ Ikwusa ozi. Mgbe m gbabara n'ime oge ụfọdụ mgbe m na-egosipụta Twitterfeed na webinar na nso nso a, agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-ekiri ha kesara na e nwere ụfọdụ nnukwu ngwaọrụ ndị ọzọ. Ekpebiri m ile anya!
Ngwaọrụ Njikwa Twitter maka Companlọ ọrụ
ExactTarget SocialEngage (chie Cotweet) na-enye ikike ijikwa ọtụtụ akụkọ, ịhazi oge, idina post ahụ na edemede onye edemede, biputere ọtụtụ akaụntụ na ụfọdụ arụmọrụ - ikike ịnye onye otu ụlọ ọrụ otu tweet. I nwekwara ike ịgbakwunye ozi mgbe ị na-ekenye tweet. SocialEngage bụzi akụkụ nke ezinụlọ Salesforce ExactTarget!
Hootsuite bụ ụlọ siri ike - gụnyere ọtụtụ ndị ọrụ, ndị editọ, ndepụta na akpaaka Twitter, ọtụtụ akaụntụ, tweets ndokwa, biputere n'ọtụtụ akaụntụ, URL shortener na ọnụ ọgụgụ, Onyeka Onwenu mwekota na ọbụna ikike ịgụnye Adsense mgbe ebugharị URL gafere.
Nke a bụ azịza kachasị ike na ụdị a. Otu njirimara a na-efu na ngwọta a, n'agbanyeghị, bụ njikwa ọrụ maka ekenye na nlekota oru.
Ejiri bụ na-emechi beta na m bụ ike ịhụchalụ ihe ngwọta na-ebe a. Howard kwuru na ha na-arụ ọrụ site na ụfọdụ nsogbu na nkwadebe maka ịga ndụ. Ana m atụ anya ịhụ ihe Twinterface nwere inye nke dị iche na nchịkọta ndị dị n'elu. Ugbu a, Twinterface na-akwalite ọtụtụ akaụntụ na ọtụtụ ndị ọrụ dị ka atụmatụ ha ugbu a.
Nke a bụ otu nke ga-asọmpi ọsọ ọsọ, yabụ na olile anya na Twinterface abụghị naanị ịchụkwudo - na-atụ anya na ha ga-abịa ụfọdụ na tebụl na ụfọdụ atụmatụ na-emebi emebi.
Nlekọta nnabata na Twitter
Onye ọ bụla nke melite Google Alerts iji gbalịa nyochaa Twitter ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na alerts nanị adịghị abịa… na mgbe ha na-eme, usoro iheomume bụ akaha.
Gbakwunye na mgbagwoju anya nke ijikwa ọtụtụ narị tweets gafee ọtụtụ akụkọ na mgbagwoju anya na igbu egbu na-adịghị anya. Radian6 na-bụ elekọta mmadụ media aha njikwa ngwá ọrụ nwere ọtụtụ atụmatụ - gụnyere nyochaa oge niile nke isi mmalite mgbasa ozi mmekọrịta, arụmọrụ zuru ezu na akpaaka.
Radian 6 na-ewere usoro ha site na ịmekọrịta Webtrends nakwa. Ijikọ ihe omume na saịtị na nlekota aha na saịtị nchịkọta ga-abụ nnukwu maka ụlọ ọrụ.
Akpaaka gafee Social Media
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji naanị Twitter, mana ziga na netwọkụ dị iche iche 40, Onyeka Onwenu bụ ngwa ọrụ gị! Ping.fm gụnyere ike iwebata ngwa mmekọrịta gị na mkpanaka site na SMS, ozi email na ozigbo ozi. Ọrụ ahụ na-enyekwa ozi ezigara ahaziri iche.
Ping.fm nwere ike ịbụ swiss agha mma nke izi ozi akpaaka na Social Media! N'ime ngwa niile edepụtara na post a, nke a bụ otu ngwa nke ọ nweghị azụmaahịa ga-adị.
Micro-ịde blọgụ ụlọ ọrụ
Chegodi inye ndi oru gi ike site n’inwe ikike inweta ihe omuma micro-blogging. Nwere ike iji ngwa ọhụrụ ole na ole na ahịa:
Dị ka Mgbasaozi saịtị:
Kemgbe 2005, Socialcast abụrụla onye na - eweta usoro ịkparịta ụka n'socialntanet na ihe ngwọta maka ndị ahịa na-eche ihu na ndị ahịa ahịa. Dabere na Irvine, California, Socialcast bụ naanị onye ọrụ SaaS nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-elekọta onwe ha na-elekọta mmadụ. Sọftụwia anyị na-ejikọ atụmatụ intranet ọdịnala na teknụzụ izipu mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji nye ndị ọrụ ike ịbawanye, mepụta ma kesaa ihe ọmụma na ụlọ ọrụ ahụ.
Pụrụ iche na Socialcast bụ ikike ịjụ ma nwee ajụjụ a zara, na -emepụta nnukwu ihe ọmụma dị n'ime maka ụlọ ọrụ ahụ. Socialcast na-azọrọ a Social Business ọgụgụ isi? ụlọ nke nchịkọta ngwaọrụ - ma visual egosi ezigbo ìhè ọ bụla intelligencia… ọ na-ele ndị ọzọ dị ka a dị mfe akụkọ.
Dị ka Yammer saịtị:
Yammer bụ ngwa ọrụ iji mee ka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe site na mgbanwe nke azịza ugboro ugboro maka otu ajụjụ dị mfe: 'Gịnị ka ị na-arụ ọrụ na ya?'
Ka ndị ọrụ na-aza ajụjụ a, a na-emepụta nri n'otu ebe etiti nke na-enyere ndị ọrụ ibe aka ịkọwa echiche, biputere akụkọ, jụọ ajụjụ, na ịkekọrịta njikọ na ozi ndị ọzọ. Yammer na-ejekwa ozi dị ka ndekọ ụlọ ọrụ nke onye ọrụ ọ bụla nwere profaịlụ yana dịka isi ihe ọmụma ebe enwere ike ịnweta ma zoo ederede mkparịta ụka gara aga.
Dabere na Present.ly saịtị:
Ugbu a na - enye ndị ọrụ gị ikike ikwupụta ọnọdụ ha ugbu a, jụọ ma zaa ajụjụ, kesaa mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ na usoro nkwukọrịta mgbanwe nke Twitter.
Ugbu a na-egosi na ị nwere ike siri ike, gụnyere Otu, Mgbakwụnye, yana Twitter dakọtara API.
Geographic na isiokwu isiokwu ezubere iche na Twitter
N'adịghị ka ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-apụta na Twitter, Twitterhawk na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzaghachi ndị ọrụ ozugbo, site na isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu, yana site na mpaghara ọnọdụ. Nke a bụ usoro m na-anwale na ogologo ogologo na-amasị atụmatụ nke.
Gwakọta atụmatụ ndị a na ọkwa email (oge ọ bụla sistemụ ahụ na-eziga tweet) yana ike soro obere URL (dịka ọ dị Hootsuite), na nke a ga-abụ ngwa ahịa azụmaahịa ụwa!
MARA: 5/13/2009 Twitter kwụsịrị igosipụta nzaghachi (@) nye ndị ị na-esoghị, ya mere na nke a nwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na ngwa dịka Twitterhawk ebe ọ bụ na Twitterhawk na-eji azịza dịka ụzọ isi kwalite.
Mee Otu na Twitter
Twitter enweghị ọrụ otu ọ bụla, mana ị nwere ike iji ya Otu iji merie adịghị ike. GroupTweet na-enye ndị otu ohere izipu ozi site na Twitter na-agbasa ozi na nzuzo naanị ndị otu.
Mepụta otu maka ụlọ ọrụ gị na ndị ahịa gị bụ ụzọ dị mma iji gbasaa ozi dị mkpa ọsọ ọsọ na mfe!
E nwere nnọọ ole na ole ngwaọrụ si n'ebe na-akwalite onwe ha dị ka Premiya enterprise management ngwa maka Twitter; ma, ọtụtụ n’ime ha bụ ezigbo ìhè na atụmatụ. Maka ụlọ ọrụ ọ bụla, nchịkọta na akpaaka kwesịrị ịbụ ihe achọrọ. Niile atụmatụ na-agbakwunyere a azụmahịa twitter ngwa kwesiri ijide n'aka na enwere ike ikwu na ọ ga - eme ka nlọghachi azụ na ntinye ego na mbọ ndị ọrụ gị na - elekọta mmadụ.
Tags: Ugboro abụọEzigbo ihe eji eme obodoọrịrahootsuiteOnyeka Onwenudị ugbu aObinna 6mkpesammekọrịta mmadụ na ibe yaejimaAnyiyammer
Gbakwunye Mgbasa Ozi Google Analytics Querystring Dynamically iji jQuery
Mee 11, 2009 na 5: 29 PM
Daalụ maka ịkwado Radian6. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m ọtụtụ ngwaọrụ, nyiwe, ngwa yana ndị dị otu a na-abịa n'ahịa. Gosiri m nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya ihe zuru oke na ndị folks anaghị ege ntị, kama na-achọ iji nlezianya jikwaa ikere òkè ha Nke ahụ abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ezigbo ihe.
Olile anya ihe niile.
Onye isi obodo, Radian6
Mee 12, 2009 na 11: 12 AM
Daalụ maka ezigbo ozi gbasara Twitter. Abụ m onye ọhụụ ma m na-amụ ikike. Ihe dị ka nke a na-enyere m aka ịme ngwa ngwa.
Jun 25, 2009 na 12: 11 PM
Akwa post! Enwere ọtụtụ ngwa ọrụ dị mma na ngwa ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ezigbo ngwá ọrụ maka azụmaahịa, ahụrụ m onwe m n'anya Na-atụgharị. Ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ maka ndị chọrọ ịkewa amaokwu Baịbụl na Twitter.
Jul 1, 2009 na 1:11 PM
Yana Radian6, m ga akwado Azụ azụ, ngwa nke 'unshortens' URLs ma nwee ike ime ka ị mara mgbe saịtị gị mere ya na Twitter!